FANDOAVAN-KETRA : Handrafitra paikady vaovao ny foibe momba ny hetra
Nisokatra omaly ary tsy hifarana raha tsy rahampitso ny atrik’asa tanterahin’ny sampan-draharaha misahana ny hetra ho fanatsarana ny fampidiran-ketra. 29 octobre 2019
Ankoatra an’i Madagasikara, misy sampan-draharaha avy amin’ny firenena hafa koa mandray anjara amin’izany. Tanjona ny hanatsarana ny fidiram-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra sy ny fanentanana ny orinasa na olon-tsotra hanefa ny anjara hetrany ho fampandrosoana ny firenena. Tombony ho an’i Madagasikara ny fampiantranoana ity tetikasa ity, raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny hetra satria betsaka ny teknisiana momba ny hetra manatrika izany.
Araka ny fanazavany hatrany, mbola mandringa ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra eto Madagasikara. Misy fiantraikany goavana amin’ny fampidiram-bola amin’ny kitapom-bolam-panjakana nefa izany. Vola manodidina ny 300 miliara Ariary no tokony hiditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana amin’ity taona 2019 ity raha ny nambarany, saingy tsy ho tratra io raha ratsy tantana na goragora ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra.
Mbola olana amin’io fandoavan-ketra io koa ny tsy fahafehezan’ireo orinasa lehibe ny lalànan’ny fandoavan-ketra. Noho izany indrindra dia nandrafitra paikady vaovao ho fanatsarana izany ny tompon’ andraikitra eo anivon’ny foibem-pitondrana ankapoben’ny hetra. Naato aloha ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra noho ny fahatsapana fa tsy araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny asa eo amin’izany sehatra izany. Ho setrin’izany kosa dia natsangana anefa ny vaomiera manokana hanao tombana ny asa vitan’ny fitondrana ankapoben’ny hetra.
“Ny fampidirana hetra eto Madagasikara dia niaraha-nahalala fa nanjakan’ny kolikoly sy ny gaboraraka ka izany no nahatonga anay nametraka ny rafitra manokana hanatsarana ny fanaraha-maso ny hetra” , hoy Andriamatoa Germain, Tale Jeneralin’ny hetra.